Dagaalkii dheeraa ee Farmaajo u galay inaysan Dalka Doorasho ka dhicin (Qormo xusuus ah) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
July 2020, waxaa furmay shirkii Dhuusamareeb 1 Dowlad goboleedyada ayaa ku heshiiyey in la qabto doorasho taladeeda loo dhan yahay kuna dhacda muddo xileedka harsan.
July 19-22 – 20, waxaa dhacay Shirkii Dhuusamareeb 2. Waxaa lagu heshiiyey in ay dalka ka dhacdo doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda oo lagu wada qanacsanyahay.
Shirkaas waxaa Farmaajo u caddaatay in Raysalwasaarihiisa uusan la wadin muddo kororsiga. Maalmo ka dib, ayuu 25 July xilka ka tuuray.
17 September 2020, ayuu Farmaajo oggolaaday heshiiska doorasho dadban.Nov 2020, Guddiyada doorashooyinka ee heer Federaal, inta badan dowlad Goboleedyada iyo Somaliland ayaa soo la soo saaray, kuwaasoo u badnaa Nabadsugid, shaqaale rayid ah iyo taageerayaal N&N.
12 April 2021, ayuu halkii uu ku taamayey soo istaagay. Wuxuu samaystay muddo kordhin labo sano ah. 25 April 2021, Gadoodkii ciidanka ayaa dhacay, taasoo qasabtay in uu muddo kordhinta ka laabto.
01 May, 2021, ayuu ka laabtay muddo kororsigii. 27 May 2021, waxaa la gaaray heshiiskii Golaha Wadatshiga Qaran ee Doorashooyinka June 19 2021, Ayaa dib loo magacaabay guddiyadii doorashada.
Oktoobar 2021 waxaa bilaabtay doorasho boob ah, oo la isku hortaagan yahay. Waxaa la soo maray loolan adag oo labo sano ku dhow, oo la isku hayey in ay dalka ka dhacdo doorasho la isla oggolyahay oo waqtigeeda ku dhacdo.
Farmaajo mar walba doorasho waa diiddanaa, ilaa iyo haatanna ma ogola doorasho tartankeeda loo siman yahay, oo uusan boobi karin, ama diidi karin natiijadeeda.
Taliyihii hore ee ciidamada Booliska Gobolka Banaadir Jeneraal Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John) ayaa kusoo baxay Doorasho ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Jeneraalka roo u tartamay...